ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများစွဲစွဲမှု - ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုလား။ (2017) - သင့် ဦး နှောက်တွင်порно
ညစ်ညမ်းစွဲ: ကတစ်ဦးကွဲပြား entity လား? (2017)
ခုနှစ် : 2017 | Volume ကို : 10 | ထုတ်ပြန်သည် :5| စာမျက်နှာ : 461-464
Adnan Kadiani, Ekram Goyal, Spandana Devabhaktuni, ဗိုလ်မှူးချုပ်ဒံယလေသ Saldanha, Bhushan Chaudhari
စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန, ဒေါက်တာ Dy Patil ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်, ဆေးရုံနှင့်သုတေသနစင်တာ, Pune, အိန္ဒိယနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း Maharashtra ပြည်နယ်, အိန္ဒိယ
Web ကိုပြည်သူများသိရှိစေရန်ထုတ်ပြန်ကြေနေ့စွဲ 14-နိုဝင်ဘာ-2017
စိတ်ရောဂါကုသရေးဌာန၊ Dr. DY Patil Medical College, Pimpri, Pune - 411 018, Maharashtra
ပံ့ပိုးမှု၏ရင်းမြစ်: အဘယ်သူမျှမ, အကျိုးစီးပွား၏ပဋိပက္ခ: အဘယ်သူမျှမ
ကျနော်တို့လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စများဆွေးနွေးရန်တွန့်ဆုတ်နေကြသည်အဖြစ်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုကိုအပေါငျးတို့သအမျိုးမျိုးအနက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောတဖြစ်ကောင်းဆက်ဆံဖို့အခက်ခဲဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာဗလာကြည့်ရှုခြင်းမှ, 34 နှစ်ပေါင်းတစ်6နှစ်အရွယ်လက်ထပ်အထီးကစွဲဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါကိစ္စတွင်တစ်ရောဂါနှင့်၎င်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကြုံတွေ့အခက်အခဲအဖြစ်ညစ်ညမ်းစွဲအသိအမှတ်ပြု၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
keywords: သိမှုအမူအကျင့်ကုထုံး, porn-စောင့်ကြည့်အပြုအမူ, ညစ်ညမ်းစွဲ
Kadiani တစ်ဦးက, Goyal အီး, Devabhaktuni S က, Saldanha bd, Chaudhari ခညစ်ညမ်းစွဲ: ကတစ်ဦးကွဲပြား entity Is ?. Med J ကို Dy Patil Univ 2017; 10: 461-4
ဘယ်လိုဒီ URL ကိုကိုးကားရန်:
Kadiani A၊ Goyal E၊ Devabhaktuni S, Saldanha BD, Chaudhari B. Pornographic စွဲ - ကွဲပြားခြားနားသောသီးခြားရပ်တည်မှုတစ်ခုလား။ Med J ကို DY Patil က Univ [အမှတ်စဉ်အွန်လိုင်း] 2017 [2017 ဒီဇင်ဘာ 22 ကိုးကား]; 10: 461-4 ။ မှရနိုင်သည် http://www.mjdrdypu.org/text.asp?2017/10/5/461/218191
မကြာသေးမီကာလများကအင်တာနက်တိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်တိုးတက်လာမှုကညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများ၏အတိုင်းအတာကိုဖော်ပြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာနေ့စဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တောင်းဆိုမှု ၆၈ သန်းနှင့်အတူညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက် ၄.၂ သန်းကျော်ရှိသည်။ အင်တာနက်ကြည့်ရှုသူ ၄၂.၇% သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်လလျှင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူဆိုက်များကိုကြည့်ရှုသူ ၇၂ သန်းရှိသည်။ တရုတ်နှင့်တောင်ကိုရီးယား၏ဝင်ငွေ ၂၈% နီးပါးသည်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၂၇.၄၀ ဘီလီယံကျော်ရရှိပြီး၎င်းသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိငတ်မွတ်သောလူ ဦး ရေ၏ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွေးမွေးရန်ဖြစ်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောဂါ 10 သို့မဟုတ် Diagnostic ၏ခွဲခြားရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ-5 (DSM-5) ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်အတွက်စိတ်ရောဂါအတွက်စာရင်းမသော်လည်းအများအပြားစွဲခံရဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့တောင်းဆိုသော်လည်းအထက်ပါဖြစ်ရပ်မှန်များ, အင်တာနက်စွဲလမ်းပေးထားသော၎င်း၏ရှေ့မှောက်တွင်ဆွေးနွေးငြင်းခုံတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ် ညစ်ညမ်းဖို့နဲ့အကူအညီကိုရှာ။ တချို့ကသုတေသီများထိုကဲ့သို့သောဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကဲ့သို့သောအခြားထူထောင်စှဲများအတွက်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူကနှိုင်းယှဉ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီ။ ကနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နိုင်သောအနီးကပ်ဆုံးအမူအကျင့်စွဲဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးမပါဘဲတစ်ဦးစွဲအဖြစ်ရည်ညွှန်းသော "လောင်းကစားဝိုင်း" ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်နှင့်အတူတစ်ဦးစွဲလမ်း diorder အဖြစ်လောင်းကစားအပါအဝင်၏ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်လောင်းကစားသမားတွေကဦးနှောက်မူမမှန်ခြင်းနှင့်လေ့ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီတွင်တွေ့မြင်အပြုအမူမူမမှန် share လုပ်ပေးကြောင်းညွှန်ပြလက်တွေ့လေ့လာမှုများအနေဖြင့်သက်သေအထောက်အထားများအပေါ်အခြေခံသည်။,
လောင်းကစားဝိုင်း, အင်တာနက် surfing, ဂိမ်း, စျေးဝယ်, အစားအစာ, အလုပ်, လိင်, etc ဆိုလိုသည်မှာအမူအကျင့်စွဲလမ်း၏လေ့လာမှု, မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းတိုးမြှင့်လူကြိုက်များမှုကိုရရှိထားသူဖြစ်သည်။ လိင်စွဲမြဲအပြုအမူတစ်ခုပြည်နယ်အခြားသူများမိမိကိုယ်ကိုနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲဖို့ ပို. ပို. အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကြားမှထွက်ပြုမူသည်။ compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, ပြည့်တန်ဆာတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံ, မျိုးစုံမိတ်ဖက်နှင့်အတူအမည်မသိလိင်, မျိုးစုံရေးရာတစ်ဦးကျူးလွန်ဆက်ဆံရေးလေ့ exhibitionism, လေ့ voyeurism, မသင့်လျော်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိထိမိမိ, သားသမီးများ၏ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်မုဒိမ်းမှုဖြစ်စဉ်များအပြင်ဘက်: လိင်စွဲပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံစွဲအများပြည်သူအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုထဲကသရုပ်ဆောင်ပါဝင်မည်မဟုတ်ပါအစားတစ်ခုကိုဖတ်နေနှင့်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်၏နာရီပါဝင်လိမ့်မည်။ 20% -60% ကောလိပ်သွားအထီးအကျိုးစီးပွားကသူတို့ဒိုမိန်းပေါ်တွင် မူတည်. ညစ်ညမ်းပြဿနာကြည့်ရှုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်၎င်း၏ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များမှတ်တမ်းတင်အနည်းငယ်သိပ္ပံနည်းကျအမှုပေါင်းအစီရင်ခံစာများရှိခဲ့သည်။, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုဆီသို့ရောက် လာ. , တထိုကဲ့သို့သောအမှုကိုတင်ပြ။
လက်ထပ်ပြီးအသက် ၃၄ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးသည် ၆ နှစ်မှစ၍ အိမ်ထောင်သည်ပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ကလိင်စိတ်ကိုစိတ်မ ၀ င်စားခြင်းနှင့်သူမဇနီးနှင့်အတူပြင်ပလူနာဌာနသို့လာခဲ့သည်။ လက်ရှိပြproblemနာသည်လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ကသူ၏ဇနီးသည်ကိုယ် ၀ န်ရှိခဲ့စဉ်ကသူတို့သည်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ကန့်သတ်မှုများကြောင့်သူတို့အသုံးပြုလေ့ရှိသောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုမကြာခဏမပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။
ခင်ပွန်း 16 နှစ်ပေါင်း၏အသက်အရွယ်ကတည်းကညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်၏သမိုင်းကိုပေး၏။ ကွာခဏထို့နောက်သူသည်ယခုစောင့်ကြည့်ရောကျလာပေမယ့်ပိုပြီးမကြာခဏတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းဖြင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ သူဟာအပျော်အပါးမိမိအလိုရှိသောအဆင့်အောင်မြင်ရန်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ပိုပြီးအချိန်ဖြုန်းစတင်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ အစီရင်ခံ၏ထိုအချိန်ကသူသည်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းကြည့်ရှုအပေါ်အချိန်များတွင် 4-5 ဇ / တစ်ရက်သို့မဟုတ် ပို. ပင်နေခဲ့ရသည်။ သူဟာ masturbating ပြီးဆုံးနှင့်သူတို့သာရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုအပေါ်ဆန္ဒပြည့်ရတဲ့အစီရင်ခံခဲ့သည်ပင်ပြီးနောက်ရုပ်ရှင်ကြည့်။ , သူ့အချိန်တိုတိုဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်သို့မဟုတ်သူတစ်စုံတစ်ဦးကများကကြားဖြတ်ခံခဲ့ရပါလျှင်, ထိုဒုက္ခဆင်းရဲဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်စိတ်တိုဖြစ်လာခဲ့သည်။ အင်တာနက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမှုစနစ်ပျက်ကွက်မှုမှဦးဆောင်ခဲ့ပြီးသူသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များဆင်းခြေရာခံလိုက်ပြီးနောက်အလုပ်မှာသူမလျော်ကန်သောအကငျြ့ဘို့သတိပေးခဲ့သည်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်မရှိတော့အလုပ်ခွင်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်များကြည့်ရှုရန်နိုင်ဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်လူနာယျတျောနှငျ့အတူညစ်ညမ်းမဂ္ဂဇင်း ယူ. သူတို့ဖတ်ရှုခြင်းကသူ့အချိန်အများစုကိုကုန်ဆုံး။ ဤရွေ့ကားအလေ့အကျင့်ကိုသိသိသာသာအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အလုပ်ထိရောက်မှုရှိသူ၏စွမ်းရည်ကိုယုတ်လျော့ခဲ့သည်။ သူကသူ့သမီးနှင့်ဇနီးနဲ့သူ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်ဦးတည်းအချိန်ပိုမိုနှင့်အတူလျော့နည်းအချိန်ဖြုန်းခဲ့တယ်။ သူ့ဇနီးကသူ့အပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုသတိထားမိခြင်းနှင့်အင်တာနက်ပိုမိုအချိန်ဖြုန်း။ သူမ၏နှင့်သူ၏သမီးအတွက်သူမ၏မေးမြန်းချက်များနှင့်စိတ်မမှမကျေနပ်ကြအဖြေတွေကိုရတဲ့တွင်သူမကသူ့ကိုရင်ဆိုင်နှင့်သူ၏လိင်စိတ်ကျေနပ်မှကြည့်ရှုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသူ့ရဲ့ပြဿနာကိုသတိထားမိဖြစ်လာခဲ့သည်။ မိမိရမ္မက်နှင့်သူ့ဇနီးချစ်ပြီးဒီရှယ်ယာမှာမိမိလက်ထပ်ထိမ်းမြားထားဖူးကြောင်းကိုသိသော်လည်းညစ်ညမ်းပစ္စည်းကြည့်ရှုဘို့အလိုဆန္ဒကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါကြောင်းလက်ခံခဲ့သည်။ သူဟာသို့သော်သူကစွန့်နိုင်မည်ခံစားခဲ့ရအဖြစ်သူပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီကိုရှာမည်မဟုတ်ကြောင်းသူမ၏သို့ပြောသည်။ သူ၏ဇနီး, သို့သော်, ယုံကြည်တယ်မဟုတ်ခဲ့, သူတိုင်ပင်ဘို့ထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်အတန်းကိုစာမေးပွဲအနိမ့်စိတ်ဓါတ်များထင်ရှားခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေစိတ်ကျရောဂါ။ သူ၏အတှေးဖြစ်စဉ်ကိုမိမိအမူအကျင့်ကိုထိန်းချုပ်ရန်သူ၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အကူအညီမဲ့နဲ့မျှော်လင့်ချက်မဲ့၏ခံစားချက်ပြသခဲ့သည်။ Hamilton ကစီးပွားပျက်ကပ်ခဲ့သည် Rating စကေး (Ham-D) တွင်သူ9သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမဘေးဥပဒ်သို့မဟုတ်စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းရှိခဲ့သည်။ တရားစီရင်တော်မူခြင်းနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်နဂိုအတိုင်းရှိကြ၏။ ကျနော်တို့လူနာနှင့်ဇနီး၏အမှတ်စဉ်များနှင့်သီးခြားတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှတဆင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ, ထွက်အုပ်ချုပ်, obsessive compulsive Disorder (OCD) ။ ဤသည်မှာနှစ်ခုစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်များကလွတ်လပ်စွာပြုလေ၏, နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်း၏တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းရောဂါကြောင့်လုံ့လဝီရိယစိတ်တွင်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အဖြစ်သက်ဆိုင်သည့် diagnosable စံစောင့်ရှောက်ခြင်းအပြီးဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ မည်သည့်မျိုး paraphilias မရှိသမိုင်းရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကသူ့ပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှတစ်ဦးကုထုံး milieu created နှင့်သူ၏အသက်တာ၌သုံးပြဿနာဒေသများ, အမည်ရ, (က) ကိုယ်ရေး, (ခ) မိသားစု, (ဂ) လုပ်ငန်းခွင်အမှာစကားပြောကြားသည်။
အဆိုပါလူနာစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်အခြားအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်အချက်များအဘို့အပြခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါလူနာမဟုတ်မမှန်ပျော့တိုးတက်မှု "ကျွန်မရဲ့ရမ္မက်ကျော်ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ " ဟုပြောဖို့လုံလောက်တဲ့ကြောင်းပြဿနာ Denial ပါရှိသောခံရဖို့ခဲ့ယူဆ။ သူကပြည့်စုံနာလန်ထူအပြုအမူအထိဦးဆောင်သောအခြေခံပြဿနာများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးကျန်းမာထုံးစံ၌သူတို့အားပြဿနာများကိုဖြေရှင်းဓိပ်ပာကရှင်းပြတယ်ခဲ့သည်; မဟုတ်ရင်, relapse ဖွယ်ရှိရလဒ်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
သူကဤကဲ့သို့သောအပြုအမူပုံစံများထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ဖိစီးမှု, ကြားဆက်ဆံရေးကိုဒုက္ခ, အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာများ, နှင့် / သို့မဟုတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခက်အခဲကဲ့သို့သောအခြားစိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်အခြေအနေပြဿနာများကနေရပ်တနိုင်ဘယ်လိုပညာတတ်ခဲ့သည်။ သူက "ငါ porn ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်မည်သူမဆိုထိခိုက်မဟုတ်" ဟုကသူ၏အပြုအမူ rationalized "နှင့်ငါလိင်လုပ်သားသွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော့်ဇနီးအပေါ်လိမ်လည်ခြင်းမဟုတ်နေပါတယ်။ " ညစ်ညမ်းနဲ့သူ့ရဲ့ကြီးထွားလာအဆက်မပြတ်နှင့်အတူ, သူအလုပ်မှာအရေးကြီးသောသတ်မှတ်ရက်ပျောက်ဆုံးခဲ့သည်သာမက သူ့မိသားစုနှင့်အတူလျော့နည်းအချိန်နေခဲ့ရသည်။
ကုထုံး၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်ယင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ရောဂါအကြီးမြတ်ဆုံးအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်စေရှိရာသတ်သတ်မှတ်မှတ်အပြုအမူများနှင့်အခြေအနေများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, အမူအကျင့်ခဲ့သည်။ အပြုအမူကုထုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့လူနာထိုကဲ့သို့သောမဂ္ဂဇင်းအဖြစ် gadgets နှင့် Pictorial အပါအဝင်ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာ access လုပ်ပါတယ်ရာမှတဆင့်အပေါငျးတို့သတွင်ကျယ်စွာယူခဲ့ပါတယ်။ သူလည်းမိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်အခြားပစ္စည်းတွေကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ကြပြီးကြောင်းကျနော်တို့ကသူတို့ကိုစွဲခံရဖို့ရှိသည်ဟုဆိုလိုဘူး, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ပိုကောင်းနည်းလမ်းများမှာသူတို့ရဲ့အသုံးဝင်မှုတိုးမြှင့်နိုင်သည်ကိုရှင်းပြခဲ့ခံခဲ့ရသည်။ အမူအကျင့်ကုထုံး၏ကနဦးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုမှာညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာအပေါ်သုံးစွဲအချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်တစ်ဦးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့စနစ်တကျပြန်လည်နာလန်ထူအစီအစဉ်ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲစတင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သိမြင်မှုအမူအကျင့်ကုထုံး (CBT), လက္ခဏာများကိုလျှော့ချချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, သိမြင်မှုပျက်ယွင်းစိန်ခေါ်နှင့်အထူးသညျအငျတာနကျ၏ compulsive အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်အခွအေနေအချက်များဖြေရှင်းရန်နှင့်မကြာခဏကသူနဲ့ဆက်စပ် maladaptive အကြံအစည်နှင့်ကိုင်တွယ်ရန်လျှောက်ထားခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းမပြုမီသတ်မှတ်ထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသည့် site တစ်ခု၊ တစ်နေ့တာအချိန်သို့မဟုတ်လူနာတစ် ဦး ၏စိတ်အခြေအနေသည်မသင့်လျော်သောအမူအကျင့်နှင့်အလွဲသုံးစားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထိုအချက်များကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်သူသည်နေ့စဉ်ကြည့်ရှုမှတ်တမ်းကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်သူသည်မည်သည့်အချိန်နှင့်မည်ကဲ့သို့ကြည့်ရှုသည်ကိုခြေရာခံရန်နှင့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစီ၏နေ့စွဲနှင့်အချိန်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုရန် ဦး ဆောင်ခဲ့သည့်လွန်ခဲ့သောအဖြစ်အပျက်များ၊ အကြောင်းအရာကိုရယူသုံး။ ထို့နောက်သူသည်အချိန်ကာလတစ်ခုစီမည်မျှကြာသည်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အထူးပြောခဲ့သည်၊ အထူးသဖြင့်မိနစ်နှင့်နာရီအရေအတွက်ကိုမှတ်တမ်းတင်သည် se နှုန်း ssion ။ သူက porn ကြည့်နေစဉ်ပြတ်တောက်ခဲ့ကြသောအရာကိုလှုပ်ရှားမှုများ, လုပ်ရပ်တွေကိုပြီးစီးခဲ့ကြသည်သောအရာကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌အသီးအသီး session ရဲ့ရလဒ်ကိုဖော်ပြထား, ဒါမှမဟုတ်သူကတစ်ဦးချင်းစီ session တစ်ခုပြီးနောက်ကြုံတွေ့ခံစားခကျြ။ ထိုကဲ့သို့သောအသေးစိတ်မှတ်တမ်း Keeping အလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုကိုဦးတည်သွားစေသည်ဟု High-အန္တရာယ်အခြေအနေများကိုသိရှိနိုင်ဖို့တစ်အခြေခံအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဒီကုသမှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းအတွက်ရည်မှန်းချက်များသတ်မှတ်ထားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။
လာမယ့်ခြေလှမ်းမှာ client ကိုကွန်ပျူတာပေါ် bookmarks ကိုသို့မဟုတ်အကြိုက်ဆုံးဖိုင်တွေဖျက်ပစ်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းအကြောင်းအရာစောင့်ကြည့်သို့မဟုတ်ဖတ်နေစဉ်တွင်သူကိုအသုံးပြုရသော paraphernalia ဖယ်ရန်အကြံပြုခဲ့သည်။
အနည်းငယ်အစည်းအဝေးများ client ကို၏သိမြင်မှုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ သိမှုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသည်သူ၏ပြဿနာ porn ကြည့်စတင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမှလှူဒါန်းခဲ့သောပြဿနာအတွေးပုံစံများစနစ်တကျမှတ်ပုံတင်ပါဝင်ပတ်သက်။ ဤသည်သူ၏ဇနီးနှင့်ကလေးဆီသို့သည်သူ၏အပြုအမူ၏ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင် Re-အကဲဖြတ်အတွက်ကူညီပေးခဲ့သည်။
ကြောင့်သင်တန်းမှာတော့ဒီသည်သူ၏အပြုအမူအပျက်သဘောနှင့်ပျက်ယွင်းနေအနက်အမျိုးအစားနှင့်သူ၏ဇနီး၏တက်ကြွသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစိန်ခေါ်တစ်ဦးချင်းစီတဖြည်းဖြည်းအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ compulsive ကြည့်ကျော်လွှားရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ client ကိုစွဲကြောင့်ဖြစ်ပွားသည့်အဓိကပြဿနာများ၏စာရင်းကိုပေးဖို့နဲ့ခုတ်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုရှောင်၏အဓိကအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အတူတက်လာရန်အားပေးတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါလူနာ 12-3 မိ၏ 45 လအတွင်းတစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးကျြောကာလအတှငျး CBT ၏ 60 အစည်းအဝေးများပေးထားခဲ့သည်။ နှင့်သူ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှု, ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်အပျော့စားစိတ်ဓာတ်ဆံ့ဖို့ကျနော်တို့ 50 ၏ဆေးထိုးအတွက်သင့်လျော်သောရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitor (SSRI) တက်ဘလက် sertraline အပေါ်စတင်အကျိုးသက်ရောက်စေမယ့်နေ့ကတစ်ကြိမ်ပိုင်းတွင် mg နှင့်တဖြည်းဖြည်းတစ်ရက် MG 150 မှတိုးတက်လာခဲ့သည်။
လူနာသည်သူ၏ဇနီးနှင့်ဆက်ဆံရေးပြသနာရှိနေစဉ်စုံတွဲများအားအကြံဥာဏ်ပေးခြင်းကိုဆိုက်ဘာဆုံချက်သို့ပြောင်းလဲခြင်းအစားထိုရင်းနှီးမှုဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ သူသည်အလုပ်ခွင်၌ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ခြင်းအားဖမ်းမိသည်နှင့်အမျှသူသည်ညစ်ညမ်းသောစိတ်ကိုမသုံးဘဲအနားယူရန်ထိရောက်သောစိတ်ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တိုးတက်သောကြွက်သားအပန်းဖြေခြင်းနှင့်အာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းနည်းလမ်းများကိုသင်ကြားခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုကြည့်ချင်တဲ့အခါတိုင်းရုံးခန်းကိုလမ်းလျှောက်ပြီးဒါမှမဟုတ်လာမယ့်အခန်းမှာမိသားစု ၀ င်ဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာကိုသွားကြည့်ဖို့သူ့ကိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ ဤနည်းစနစ်များကသူ့ကိုပြtheနာရှိသောအသုံးအနှုန်းမှသူ့ကိုယ်သူနို့ဖြတ်ပြီးစွဲလမ်းစေသောအမူအကျင့်ဟောင်းများကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့်နည်းလမ်းများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်စေသည်။ အစည်းအဝေးများတွင်သူ၏ဇနီးကိုတဖြည်းဖြည်းပါ ၀ င်စေခြင်း၊ ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးနှင့်အပြုအမူဖလှယ်နည်းသည်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။ သူသည်သူ၏အိမ်ထောင်ရေးပြissuesနာများကိုသူဖြေရှင်းပြီးပြီဟုတစ်ကြိမ်တည်းအကြိမ်ကြိမ်လူနာလူနာပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးနောက် ၃ လအကြာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် SSRI တက်ဘလက် sertraline ကိုကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ လူနာကညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းအပြုအမူ၏ကြိမ်နှုန်းသိသိသာသာကျဆင်းခြင်းနှင့်သူ၏ဇနီးနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိခြင်းတို့ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအရဇနီးဖြစ်သူသည်သူမ၏ခင်ပွန်း၏အပြုအမူနှင့်အိမ်ထောင်ရေးဘ ၀ ၏အစောပိုင်းကာလများအတွင်းသူတို့ကြားတွင်ရှိခဲ့သည့်အိမ်ထောင်ရေးနှောင်ကြိုးတိုးတက်မှုကိုတင်ပြခဲ့သည်။
လူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏အတွင်းစိတ်ကိုမိမိကိုယ်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေရန်အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုလေ့လာရန်မည်သူမဆိုအတွက်မရေမတွက်နိုင်သောအခွင့်အလမ်းများရှိသည်။ Meerkerk မှအင်တာနက် application များ၏ ၁ နှစ်တာလေ့လာမှု et al။ စွဲလမ်းများအတွက်အမြင့်ဆုံးအလားအလာရှိသည်ဖို့အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ ယင်း၏5အတွက် DSMth ထုတ်ဝေမယ့် nonsubstance-related စွဲရောဂါအဖြစ်လောင်းကစားရောဂါပါဝင်သည်။ လောင်းကစားစွဲရောဂါမှအဆိုပါစံသတ်မှတ်ချက်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲ, အမည်ရ compulsive စားသုံးမှု, ရုပ်သိမ်းရေး, သည်းခံစိတ်ပင်လူမှုလုပ်ငန်းခွင်ချို့ယွင်းပြီးနောက်ပြန်ဖြတ်နိုင်ခြင်း၏အထွေထွေဝိသေသလက္ခဏာများတလျှောက်လုပ်ပါတယ်ခဲ့ကြသည်။ hypersexuality နှင့်၎င်း၏မျိုးကွဲအလွန်အကျွံညစ်ညမ်းကြည့်ဘို့အဖြေရှာတဲ့စံတည်ထောင်ရန်ဖို့လုံလောက်တဲ့စာပေမျှမဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့ရာတွင်ထိုသို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါဖြည့်စွက်ခြင်းမှမပြောဘဲ နေ. ။, ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (PPU) Gola များအတွက်ကုသမှုရှာကြံယောက်ျားတစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု et al. ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ်သည်ထက်အထူးသခေါ်ဆောင်သွားဓာတ်ပုံများကိုတစ်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဒေသ (ထို ventral striatum) ၏တိုးမြှင့် activation တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ကဦးနှောက်ကို Activation (ပိုမိုမြင့်မား "လို") ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုရန်တိုးမြှင့်အပြုအမူလှုံ့ဆျောမှုဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ Ventral striatal PPU ၏ပြင်းထန်မှုမှသိသိသာသာဆက်စပ် reactivity ကို, တစ်ပတ်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုပမာဏနှင့်အပတ်စဉ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအရေအတွက်။ ဤရွေ့ကားပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းမမှန်ဆင်တူဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် PPU အားဖြင့်အမူအကျင့်များနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းမှုကိုပစ်မှတ်ထားအတွက်ကြားဝင် PPU နှင့်အတူယောက်ျားကကူညီစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်းတစ်ဦးအမူအကျင့်စွဲကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။, လေ့လာမှုများအရလောင်းကစားသူများ၏အန္တရာယ်ကိုကိုင်တွယ်ခြင်းအပြုအမူတွင်အာရုံကြောဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးပလာစမာတွင်အောက်ပါပုံမှန် methoxy-3 hydroxyphenylglycol (MHPG) အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် ဦး နှောက်တွင်းရှိအရည်များတွင် MHPG အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွားလာသည်ဟုဖော်ပြသည်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများအတွက် serotonergic စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြံပြုဖို့သက်သေအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်။ ထို့ကွောငျ့အလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့သောအရာတွေဖြစ်တဲ့အင်တာနက်စွဲလမ်းအဖြစ်ကိစ္စများတွင် SSRI ၏အသုံးဝင်မှုကျိုးနပ်, ငါတို့သည်ငါတို့၏အမှု၌အသုံးဝင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီကိုလက်ခံရန်သူ၏ကနဦးတွန့်ဆုတ်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ကိုရှာဖွေခဲ့ပေ။
တစ်ဦးညစ်ညမ်းစွဲသောကြောင့်အမှုတောင်းဆိုများအတွက်သတ်မှတ်ချက်အမူအကျင့်စွဲများအတွက်ယေဘုယျသတ်မှတ်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ပုံရသည်။ ကြောင်းအတွက်သူသည်းခံစိတ်, ရုပ်သိမ်းရေး, salience, သူ၏ porn-စောင့်ကြည့်အပြုအမူမှဆက်စပ်လူမှုလုပ်ငန်းခွင်ချွတ်ယွင်းခဲ့သညျ။
စာရေးသူထိုလူအပေါင်းတို့သည်သင့်လျော်သောလူနာသဘောတူခွင့်ပြုချက်ပုံစံများကိုရယူကြပြီသက်သေခံပြီးဖြစ်သည်။ ပုံစံလူနာ (s) / သူ / သူမ၏ / သူတို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေနှင့်ဂျာနယ်အစီရင်ခံခံရဖို့နဲ့အခြားလက်တွေ့သတင်းအချက်အလက်များအတွက်သူ / သူမ၏ / သူတို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ပေးပြီသိရသည်။ အဆိုပါလူနာသူတို့၏အမည်များနှင့်အတိုကောက်ထုတ်ဝေမည်မဟုတ်ပါနှင့်ကြောင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုဟာသူတို့ရဲ့အထောက်အထားကိုဖုံးကွယ်ဖို့လုပ်ပါလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်အမည်မဖော်အာမခံမရနိုင်သည်ကိုနားလည်ပါသည်။
1. : ကနေရရှိနိုင် http://www.internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html။ [နောက်ဆုံး 2017 ဇန်နဝါရီ 25 အပေါ်ဝင်ရောက်] ။
2. Darshan က MS, Sathyanarayana Rao က TS, Manickam S က, Tandon တစ်ဦးကရမ်ဃ Dhat syndrome ရောဂါနှင့်အတူညစ်ညမ်းစွဲ၏တစ်ဦးအမှုအစီရင်ခံစာ။ အိန္ဒိယ J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 2014; 56: 385-7 ။ : ကနေရရှိနိုင် http://www.indianjpsychiatry.org/text.asp?2014/56/4/385/146536။ [နောက်ဆုံး 2017 ဇန်နဝါရီ 23 အပေါ်ကိုးကား] ။
3. Leeman RF, Potenza MN ။ တူညီခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားကွဲပြားခြားနားမှု: Impulse နှင့် compulsive အပေါ်တစ်ဦးကအာရုံစိုက်။ Psychopharmacology (Berl) 2012; 219: 469-90 ။
4. Alavi အက်စ်အက်စ်, Ferdosi M က, Jannatifard က F, Eslami က M, Alaghemandan H ကို, ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲနှိုင်းယှဉ် Setare အမ်အပြုအမူစွဲ: စိတ်ရောဂါနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်များ၏ပေးစာယူ။ int J ကို Prev Med 2012; 3: 290-4 ။
5. Bancroft J ကို, Vukadinovic Z. လိင်စွဲလမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse, ဒါမှမဟုတ်ဘာလဲ? တစ်သီအိုရီမော်ဒယ်ဆီသို့။ လိင်သုတေသန 2004 ၏ဂျာနယ်; 41: 225-34 ။
6. Twohig အမတ်, Crosby သည် JM, ကော့ JM ။ ဘယ်လိုအဘယ်သူအဘို့ကပြဿနာဖြစ်ပြီး, အဘယ်ကြောင့်: အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်း, လိင်စွဲလမ်း compulsive 2009; 16: 253-66 ။
7. Meerkerk GJ၊ Van Den Eijnden RJ၊ Garretsen HF ။ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း - ၎င်းသည်လိင်နှင့်ပတ်သက်သည်။ Cyberpsychol Behav 2006; ၉း၉၅-၁၀၃ ။
8. ရိဒ် RC, လက်သမား BN, Hook ဖြစ်မှု, Garo S က, Manning JC, Gilliland R ကို, et al ။ hypersexual ရောဂါများအတွက် DSM-5 လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာ။ J ကိုလိင် Med 2012; 9: 2868-77 ။
9. American Psychiatric Association ။ diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲ (DSM-5®) ။ Arlington, VA သို့: အမေရိကန်စိတ်ရောဂါထုတ်ဝေရေး; 2013 ။ စ။ 585-92 ။
10 ။ Gola M က, Wordecha M က, Sescousse, G, Starowicz ML, Kossowski B, Wypych M က, et al။ ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းဖြစ်နိုင်သလား? ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကုသမှုရှာကြံယောက်ျားတစ်ဦး fMRI လေ့လာမှု။ Doi: 10.1101 / 057083 http://dx.doi.org/10.1101/057083။ [နောက်ဆုံး 2017 ဖေဖော်ဝါရီ 22 အပေါ်ဝင်ရောက်] ။
11 ။ ပိုမိုနှစ်သက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစောင့်ကြည့်သည့်အခါအမှတ်တံဆိပ် M က, Snagowski J ကို, Laier ကို C, Maderwald အက်စ် Ventral striatum လှုပ်ရှားမှုကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲလက္ခဏာတွေဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ Neuroimage 2016; 129: 224-32 ။
12 ။ Klucken T က, Wehrum-Osinsky S က, Schweckendiek J ကို, Kruse အို Stark R. ALTER စာစားချင်စိတ်ကိုအေးစက်နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှု။ J ကိုလိင် Med 2016; 13: 627-36 ။
13 ။ Wilson က D:, da Silva Lobo DS, Tavares H ကို, တပါးအမျိုးသားတို့သည် V ကို, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းရောဂါအတွက် serotonin မျိုးဗီဇ၏ Vallada အိပ်ချ်မိသားစု-based အသင်းအဖွဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: အ 5HT-2A receptor မျိုးရိုးဗီဇအတွက်အားနည်းချက်အန္တရာယ်များ၏အထောက်အထား။ J ကို Mol neuroscience 2013; 49: 550-3 ။